Mbola tolona mafotaka ny an’ny mpamaham-bolongan’i Gabon · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2009 20:05 GMT
Notsongaina tao amin'ny bolonan'ny Komity miaro ny mpanao gazety tamin'ny 2 Oktobra 2009 ity lahatsoratra ity. Nierana ny famoahana azy etoana.
Hatramin'ity fahavaratra ity dia tsy nahalala zavatra betsaka momba an'i Gabon aho, ankoatra ny heno kisandrasendra fa manana PIB mitovy amin'ny an'i Paortigaly ity firenena manana mponina 1,4 arivoarivo ity. Niova izany fahafantarana izany taorian'ny 3 Jolay rehefa nahazo mailaka avy tamin'i Alice Backer, tonian'nyGlobal Voices Lingua teny frantsay teo aloha izaho sy i Lova Rakotomalala, samy mpamaham-bolongana avy eto Madagasikara, mba hitatitra ny fifidianana ho filoham-pirenena notontosaina tany Gabon tamin'ny 30 aogositra. Nanaiky aho satria nila rivo-baovao. Sady amin'ny maha-mpamaham-bolongana ahy ao amin'ny Global Voices teny Malagasy, dia efa nitati-baovao ny momba ny krizy politika nandrovitra ny nosin'ny Oseana Indiana dia i Madagasikara rahateo aho. Nanampy tamin'ny alalan'ny fametrahana sehatra Foko-ushahidi, nahafahan'ny olo-tsotra nandefa SMS nijoroany vavolombelona, fitateram-baovao mivantana (eo noho eo) amin'ny alalan'ny Twitter, ary ny vohikala eto an-toerana tahaka an'i Topmada, i Lova, izaho ary ny mpamaham-bolongana hafa no nitatitra ny endriky ny krizy amin'ny lafiny rehetra. Misy aza ny fitateram- baovaon’ olo-tsotra no notsongain’ ny gazety iraisam-pirenena rehefa hita fa nisara-kevitra ho lasa mpanohana vondrona politika ny gazety malagasy.
Eo amin'ny lafiny ilany kosa dia voasokajy ho firenena “voageja” eo amin'ny lafiny teknolojia i Gabon. Latsaky ny 6 isanjaton'ny mponina no manam-pahafahana hijery aterineto, araka ny voalazan'ny InternetWorldStats. Raha nihora-panoherana ny nanakatonan'ny filohantsika teo aloha ny fahitalavitry ny mpanohitra azy ny olona ary anisan'ny nampianjera azy teo amin'ny fitondrana, efa maridrefy eken'ny gazety any Gabon hatramin'ny taona maro kosa ny sivana, araka ny lazain'ny fikambanana mpiaro ny fahalalahan-gazety maro.
23 ny isan'ny nirotsaka hofidiana, maro no nanao fampielezan- kevitra tamin'ny alalan'ny vohikala toa an'i Ali9, Mamboundou, AndreMbaObame na i Moubamba. Henjana dia henjana tokoa ny fampielezan-kevitra tamin'ny alalan'ny vohi-tserasera sosialy. Navitrika dia navitrika tamin'ny fampiasana Facebook, Flickr, YouTube ary Twitter ohatra ny iray amin'ny mpifaninana, dia ilay mpanao gazety Frantsay-Gaboney Bruno Ben Moumbamba. Niavaka tamin'ny alalan'ny fampiasana SMS ho an'ny tsirairay indroa miantoana tamin'ny alalan'ireo mpanao tolotr'antso am-pinday telo lehibe tany an-toerana dia ny Zain, Libertis, ary ny Moov kosa ny kandidàn'ny antoko eo amin'ny fitondrana Ali Ben Bongo.
Any amin'ny bar (antsoina any hoe “makis”) afovoan-tanànan'i Libreville distrikan'i Louis, moa ny olona no miady hevitra amin'ny zavatra rehetra sady miara-misotrosotro ny labieran'ny ao an-toerana “Regab” sy tsaky endin-trondro. Koa satria moa ataon'i Bongo ampihimamba ny haino aman- jerim- panjakana, ary miompana amin'ny fivavahana na amin'ny fialam-boly ny ankamaroan'ny radio ao an-toerana, sady eo ampelatanan'ny sangan'olona amin'ny lafiny politika, fandraharahana ary fivavahana ny fahitalavitra, dia lasa mitodika any amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena no manara-baovao ny ankamaroan'ny Gaboney te-hihaino vaovao tsy mitongilana. Indrisy moa fa voafefin'ny sivana, fampitahorana, ary herisetra ny mpitati-baovao an-gazety sy amin'ny haino aman-jery manaraka ny fifidianana.
Tamin'ny voalohany ny tanora maro nifanena tamiko dia tsy liana loatra tamin'ny aterineto. Ny zava-misy, ireo mba nandalim-pahaizana indrindra no niteny tamiko fa ny ampiasan'izy ireo ny serasera dia natokana hamakiana mailaka, hikarajiana ary mandany andro amin'ny vohikala fikaotiana olona. Misy ireo liana ihany ny hamaham-bolongana saingy mitady karama amin'ny fanaovana izany. Na izany aza, noho ny fifanampiana, dia misy ireo maningatsingana nanao ny dingana voalohany hampiasa ny aterineto ho fampitan-kafatra ara-tsosialy, ka mihamisongadina tsikelikely ny feon'ireo mpiserasera vaovao ireo. Nizara ny niainany nandritra androm-pifidianana ao amin'ny YouTube ny mpanao gazety sady mpikatroka Gaston Asséko. Roger Edima Mavoungou Wilson, matihanina amin'ny fifandraisana, kosa dia nanokatra bolongana ary mazoto mi-tweet (sioka). Régis Ngoma, mpanao hatsikana ao an-toerana, aza moa dia nanokatra kaontyYouTube ihany koa ary namoaka lahatsary manebaka ny fifidianana.
Raha tsy jerena kosa izany, dia tena nandia fotoan-tsarotra tokoa ny fanangonam-baovao nataoko. Tsaroako tsara fa tsy afa-namoaka lahatsoratra aho rehefa notapahin'ny mpanao tolotr'antso ny SMS nandritra ny fifidianana. Vokatr'izany, dia tsy afa-niainga mihitsy ny sehatra Ushahidi nampiasain'ny Gaboney ampielezana nonina tany Frantsa antsoina hoe Ny anjely mpiambin'i Gabon. Na izany aza dia nanamora ny fifampitam-baovao teo amin'izay tao an-toerana sy tany ampielezana ny seha-tserasera sosialy. Nitsambikina ho eo amin'ny tampony aza ny tag “#Gabon” ho an'ny Twitter miteny frantsay nandritra ny namoahana ny valim-pifidianana, araka ny voalazan'ny Twirus.
Mbola mampisalasa ny valim-pifidianana ho filoham- pirenena rehefa nihanandroso ny fanisam-bato indray mandeha koa, mbola voateritery ihany ny mpanao gazety. Vao tamin'ny faran'ny herinandro teo aza moa dia notazonina noho ny nanoritany sariitatra-na polisy roa ny mpanao sariitatra sady mpamaham-bolongana Patrick Essono. Ny omalin'io moa dia notazonina ihany koa noho ny namoahany an-gazety ny fakana feo ireo mponina any Port-Gentil ny tonian'ny lahatsoratry ny gazetim-panjakana L’Union, Albert Yangari, satria nambaran’ ireo olona ireo fa maro kokoa noho izay nolazain'ny governemanta ny olona matin'ny herisetra taorian'ny fifidianana. Tamin'ity herinandro ity kosa indray dia maro no nilaza fa tadiavin'ny mpitandro ny filaminana ny tranon'ny mpanao gazetyJonas Moulenda, izay nanao ny fakana feo, ary efa nahazo fandrahonana ho faty izy.
Tantaran'ny Gabòna farany
30 Septambra 2020Afrika Mainty
Anjely mainty 🙂
12 Oktobra 2009, 05:29